Pyridoxal Hydrochloride အမှုန့် (65-22-5) hplc≥98% Buy | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း / Pyridoxal Hydrochloride အမှုန့်
SKU: 65-22-5. အမျိုးအစား: R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Pyridoxal Hydrochloride အမှုန့် (65-22-5) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Pyridoxine HCl အမှုန့် ဗီတာမင် B6 ၏ Hydrochloride ဆားဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်သဘာဝကျကျလျှောက်ထားတဲ့အခါ, Pyridoxine ဆိုဒီယမ်နဲ့ပိုတက်စီယမ်၏ခွင်ကိုကူညီပေးနေအဖြစ်သွေးနီဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်။ ဒါဟာအစဝီကီပီးဒီးယားသည်နှင့်အညီ, ဘောက်, နှင်းခူနှင့် psoriasis များအတွက်တားဆီးကာကွယ်ရေးဖြစ်ထင်နေသည်။
Pyridoxal Hydrochloride ကဗီဒီယို
Pyridoxal Hydrochloride အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Pyridoxal Hydrochloride
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 159 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ 162
အရောင်: အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အဖြူ Crystalline ချွတ်
Pyridoxal Hydrochloride သံသရာ
Commons က BRAND (S): Pyridoxal Hydrochloride
ယေဘုယျအားဖြင့် NAME (S က): Pyridoxal HCL
Pyridoxal Hydrochloride အသုံးပြုမှု
သငျသညျဗီတာမင် B6 depletes နှင့် (ထိုကဲ့သို့သော penicillamine သို့မဟုတ် Isoniazid ကဲ့သို့) ကိုအခြားဗီတာမင် B ပျက်ဆီးပါဘူးတဲ့ဆေးယူပြီးလျှင်,a"ကိုပြည့်စုံ B က" ပုံသေနည်းယူသင့်ပါတယ်။ ဗီတာမင် B အတူတကွအလုပ်လုပ်သောကွောငျ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီနေရာတွင်ဥပမာအခြို့နေသောခေါင်းစဉ်:
သင့်ခန္ဓာကိုယ် pyridoxine အတူ niacin ချို့တဲ့မှုအတွက်လျော်ကြေးပေးနိုင်ပါတယ်။
homocysteine ​​၏စည်းမျဉ်းတစ်ခုရောင်ရမ်းနှလုံးရောဂါနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားအနည်းဆုံး pyridoxine (B6), niacin (B3), နှင့် cobalamine (B12) ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
B6 ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ရှိသည်သောပြည်သူ့နှလုံးရောဂါထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမဲ့သူတို့ B6 နှင့်ဖောလစ်အက်ဆစ်နှစ်ခုလုံးကိုလကျခံရရှိမဟုတ်လျှင်နှုန်းထားများ ofheart ရောဂါမသှားဘူး။
Pyridoxal Hydrochloride ၏သောက်သုံးသောကဘာလဲ
နိမ့်ဆုံး B6 ချို့တဲ့အကြောင်းကို 1.7 မီလီဂရမ် olderadults အတွက်နေ့ဖြစ်၏ရှောင်ရှားရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျခိုငျခံ့သောစီရီရယ်နှင့် / သို့မဟုတ်အဖြူရောင်မုန့်သုံးခုစားသုံးခြင်းမှရနိုင်တယ်။
သို့သျောလညျးကို non-ခိုင်ခံ့သောအစာအာဟာရမှအများကြီးဗီတာမင် B6 ရဖို့, သငျသညျအစာကိုစားရန်လိုအပ်မည်ဟု:
10 အလင်း-မုန့်ညက်ကြက်သား (ချက်ပြုတ်) ၏အောင်စ (280 ဂရမ်), သို့မဟုတ်
11 ချက်ပြုတ်ဆော်လမွန်၏အောင်စ (308 ဂရမ်), သို့မဟုတ်
4 ငှက်ပျောသီး, ဒါမှမဟုတ်
2-1 /2အသားအရေနှင့်အတူ, အာလူးဖုတ်, ဒါမှမဟုတ်
ကုန်ကြမ်းဟင်းနုနွယ်ရွက်၏ 1 ပေါင်
လူအများစုအလွန်အမင်းလုပ်ငန်းများ၌စီရီရယ်နှင့်မုန့်ကိုစာရေးတံကိုစားကျင့်သောကြောင့်, ဗီတာမင် B6 ချို့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်သင်တို့ရှိသမျှ-သဘာဝအစာစားခြင်းအားဖြင့်ညာဘက်အရာလုပ်နေတာမဟုတ်လျှင်ရှားပါးပါ!
ဘယ်လို Pyridoxal Hydrochloride အကျင့်ကိုကျင့်
Pyridoxine HCl ဗီတာမင် B6 ၏ Hydrochloride ဆားဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်သဘာဝကျကျလျှောက်ထားတဲ့အခါ, Pyridoxine ဆိုဒီယမ်နဲ့ပိုတက်စီယမ်၏ခွင်ကိုကူညီပေးနေအဖြစ်သွေးနီဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်။ ဒါဟာအစဝီကီပီးဒီးယားသည်နှင့်အညီ, ဘောက်, နှင်းခူနှင့် psoriasis များအတွက်တားဆီးကာကွယ်ရေးဖြစ်ထင်နေသည်။ ဤအတောင်းဆိုမှုများ (CosmeticsCop.com) အတည်ပြုရန်အနည်းငယ်သာသုတေသနလည်းမရှိပေမယ့်ဒါဟာအစ, အရေပြားမှ Topic လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာ Anti-ဘက်တီးရီးယားများနှင့်ဓါတ်တိုးဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်ဖို့စဉ်းစားထားသည်။ Topic လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဗီတာမင် B6 ကိုယ်တိုင်ကတိုက်ရိုက်အသားအရေစောင့်ရှောက်မှုကြိုက်တယ်သည်မဟုတ်ပေမယ့်တစ်ဦးချို့တဲ့အဆက်အသွယ်အရေပြားရောင်ရမ်း, နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းများ, နှင်းခူနှင့် blisertering (iHealthDirectory.com) အပါအဝင်အရေပြားပြဿနာများ, ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် B6 သဘာဝကျကျသီးနှံအစေ့, ပဲ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, နေ့စဉ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ, ကြက်ဥ, ငါး, အသားနှင့်မုန့်ညက်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော် Pyridoxine သာအရှေ့တောင်အာရှကနေနဂါးအသီးများအပါအဝင်အနည်းငယ်အသီးအနှံ, သဘာတွေ့ရှိရပါသည်။ အလှကုန်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များတွင် Pyridoxine တစ်အသားအရေနှင့်ဆံကေသာအေးစက်အေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြုသည်နှင့်ရေချိုးထွက်ပစ္စည်းများ, ဆပ်ပြာနှင့်ဆပ်ပြာ, သန့်စင်ပစ္စည်းများ, ဆံပင်စောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များနှင့်အသားအရေစောင့်ရှောက်မှုလိမ်းအပါအဝင်ဖော်မြူလာ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး, တွေ့ရပါသည်။
Pyridoxal Hydrochloride ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
သငျသညျတခြားနေရာကဒီ site ပေါ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သကဲ့သို့, B6 ဖြည့်စွက်ဝက်ခြံ / rosacea, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှုရောဂါနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု-hyperactivity ရောဂါ (ADHD), အဆစ်အဆစ်, ဓာတ်မတည်, စိတ်ကျရောဂါမြင့်မား homocysteine, နှလုံးရောဂါ, မြင့်မားသော lipid အဆင့်ဆင့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် , ကိုယ်ခံစွမ်းအားစိတ်ကျရောဂါ, နံနက်အနာရောဂါ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ဆက်စပ်စိတ်ကျရောဂါ, ပါးစပ်တားဆေးအသုံးပြုခြင်းကိုနဲ့ဆက်စပ်စိတ်ကျရောဂါ, premenstrual syndrome ရောဂါနှင့် premenstrual dysphoric ရောဂါ, သွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေ, အသက်-ဆက်စပ်သိမြင်မှုကျဆင်းလာခြင်းနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မဟုတ်ကြောင်းမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှု, ကြွက်သားကြွက်တက်, CHAP နှုတ်ခမ်း, မျက်စိ, ဆီးအိမ်ပိုးဝင်, သွေးတိုး, ရေ retention ကို, ဆီးချိုကျောက်ကပ်ရောဂါ, ပန်းနာရင်ကြပ်, carpal ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း syndrome ရောဂါ, ကျိုင်းအနာစိမ်း (aphthous အနာ), schizophrenia များ၏ပုံစံအမျိုးမျိုး, vertigo နှင့်အဝလွန်။
Pyridoxal Hydrochloride စျေးကွက်
Pyridoxal Hydrochloride ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
pyridoxine Hydrochloride ကဘာလဲ? Pyridoxine အပင်များ, အထူးသဖြင့်ဂျုံ၏ပိုးအတွက်ဆန်နှင့်ပြောင်းဖူးဖွငျ့ဗီတာမင် B6 ၏ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် pyridoxine HCl အဖြစ်လူသိများ Pyridoxine Hydrochloride, သင်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုသိုလှောင်အဖြစ်အထူးသဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်ကြောင်းဗီတာမင် B ကဖြည့်စွက်စေရန်အသုံးပြုနိုင်ခြောက်သွေ့, အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းနီးပါးထိုကဲ့သို့သော CHAP နှုတ်ခမ်း, ရောင်ရမ်းမျက်ခမ်းနှင့်အိပ်အဖြစ်ချို့တဲ့ရောဂါလက္ခဏာကိုရှောင်ရှားဖို့လုံလောက်တဲ့ B6 ရရှိသွားတဲ့, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းမရောဂါကနေအကောင်းဆုံးပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်အလုံအလောက်ဗီတာမင် B6 ရရှိသွားတဲ့။ ဤတွင်လူတိုင်းရောဂါတိုက်ဖျက်ရန်နှင့်ကျန်းမာသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဖြည့်စွက်အတွက် pyridoxine Hydrochloride အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရန်လိုအပ်ပါသည်အရာသုံးခုရှိပါတယ်။
AASraw ထံမှ Pyridoxal Hydrochloride ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
Pyridoxal Hydrochloride ချက်ပြုတ်နည်း